အစားခံချင်စိတ်များ – Grab Love Story
” စိုးမြင့်ရေ ” ” ပြော … ကိုစံတင့် ” ဆောင်းအကုန် နွေအကူးမို့ လယ်ယာ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ပြီး ပြန်လာသော ရွာသူရွာသားများ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြင့် ဆူညံ နေသည်။ ” ည … အရက်တိုက်ကွာ … နက်ဖန် …… မင်း စပါးတွေ …… အပြီး ရိတ်မယ် ” ” ရပါတယ်ဗျာ … ညကြ …… ခင်စမ်း ကို … အမြည်း လုပ်ခိုင်း ထားမယ် ” ရွာလယ် လမ်းမကြီးပေါ် မိန်းမတစ်ချို့ ထဘီတိုတို ထမင်းချိုင့်လေးများ ကိုင်ရင်း တနေ့တာ ပင်ပန်းသမျှ ပြေပျောက်စေရန် ယောက်ျား တချို့မှာလည်း ညပိုင်း အရက်သောက်ရန် လယ်ရှင် ယာရှင် များထံ ပူဆာ နေကြ၏။ တစ်နေကုန် ပင်ပန်းထားသမျှ ညပိုင်း အရက်ဖြင့် အပန်းဖြေ ကြသည်မှာ မြေစွန်း ရွာလေး၏ ဓဧလ့ စရိုက်ပင်။ ” ဟေး …… စိုးမြင့် …… ဒီနှစ် မောင်ရင့် … စပါးခင်းက … အအောင်ဆုံးပါကွာ ” ” ဟုတ် … ဦးကြီး ရေ … မနှစ်က … ရှုံးကြေး ပြန်ရ လောက်တယ် ” စိုးမြင့် အိမ်နား အရောက် ရွာ၏ အနောက်ဖက်ခြမ်း နေထိုင်သူ ဦးသာအောင် လှမ်းပြောနေသဖြင့် ပြန်ဖြေ နေသည်။
” အေးပါ …… မရင်းကွင်းကို … ငါ့ ဘဲတွေ … လာကျောင်းမှာနော် ” ” ဟုတ် … ဦးကြီး ” စပါး ရိတ်ပြီးသည်နှင့် လယ်ကွင်းထဲ စပါး အကျန်များ ခရုများ ဂဏန်းများ ဥစမ်း နေသော ဘဲများ အတွက် အထူး ကောင်းမွန်သော အစာ ဖြစ်၏။ စိုးမြင့် အိမ်ရောက်ချိန် အိမ်ရှေ့စားပွဲပေါ် ရေနွေးကြမ်းနှင့် ဆတ်သားခြောက်ဖုတ် အဆင်သင့် ပြင်ထားကာ သနပ်ခါး အဖွေးသားနှင့် မယားချောလေးအား တွေ့လိုက်ရသည်။ ” ဟေး …… အတော်ပဲဟေ့ … ညကြ … ကိုစံတင့် တို့ အဖွဲ … လာမှာ … ဆတ်သားခြောက် ရှိသေးရင် ထပ်ဖုတ်ဟေ့ … ခင်စမ်း ” ” အမလေးတော် … စပါးတွေ ရိတ်ဖို့ … ကျန်သေးတယ် … တော်တို့က …… သောက်ပွဲ ကျင်းကြ မလို့လား ” ” နက်ဖန်ဆို … ပြီးပါပြီ …… ခင်စမ်းရယ် … ကိုစံတင့် တို့ အဖွဲ့က … တကယ် အလုပ် လုပ်တာ … ပြန် သိတတ် ရမှာ ” ” မယ့်လေး … ဟုတ်ပါပြီရှင် … လာခဲ့ … ခဏ နားဦး … ချွေးတိတ်မှ ရေချိုး … အအေး ပတ်မယ် ” မယားဖြစ်သူ ဘေးနား ခဏထိုင်ကာ ချွေးခြောက်သည်နှင့် ရေချိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ရေစည်ကန် ရှိရာ အိမ်အနောက်ဖက် လျှောက်လာ ခဲ့တော့သည်။
ခင်စမ်းရီလည်း ဆတ်သားခြောက် ဖုတ်ရန် မီးဖိုချောင်ထဲ ဝင်လာခဲ့၏။ ကြောင်အိမ်ထဲ သိမ်းထားသော ဆတ်သားခြောက် အခွေအား ယူကာ ဓါးဖြင့် အနေတော် ခုတ်ထစ်ပြီး မီးပြန် မွှေးကာ ထပ်ဖုတ် နေသည်။ ” မမရီ …… ကိုကြီး စိုး … ပြန်ရောက်ပြီလား ” ” အင်း … နောက်ဖေးမှာ ရေချိုး နေတယ် ” အောက်ပိုင်း ကျက်သော ဆတ်သားခြောက် တုံးများအား အထက်အောက် လှည့်ပေး နေစဉ် နောက်ကျော ဘက်မှ ညီမဖြစ်သူ၏ ယောက်ျား ဝင်းကို စကားသံ ကြားရသဖြင့် ပြန်ဖြေ လိုက်၏။ ” နင်က … ဘာပြောမလို့လဲ …… ဝင်းကို ” ” ဟိုလေ … အမ ညီမရဲ့ … ပိုက်ဆံ … ယူသုံး မိလို့ … လင်မယား စကားများထားတာ … အဲဒါ … ” ဝင်းကို စကားပြောရင်း ရပ်ကာ အကြည့်ရွေ့ လိုက်သည်။ ခင်စမ်းရီ၏ ထမိန်အောက် ပေါင်တံ ဖွေးဖွေးလေးအား မီးဖိုမှ မီးအလင်း ရောင်ဖြင့် မြင်နေရသည်။ ဆတ်သား ခြောက်အား မဲဖုတ်နေသဖြင့် ထမိန် အောက်နားစမှာ ဒူးဆစ်နား ရောက်နေပြီး အောက်စ လွတ်နေသည်ကို သတိ မထားမိပေ။ ခင်စမ်းရီမှာ တောသူဆိုသော်လည်း အသားဖြူကာ ရုပ်ရည် ကြည့်ကောင်း လှ၏။
ခန္ဓာကိုယ် ပြည့်ပြည့် တင်းတင်းနဲ့မို့ ရွာထဲ ချစ်သူခင်သူ ပေါများ လှသည်။ အနေ တည်သဖြင့် ဝင်းကိုမှာ အနား မကပ် ရဲပေ။ နောက်ဆုံး ခင်စမ်းရီ ယောက်ျား ယူသည်နှင့် ခင်စမ်းရီ၏ ညီမ တင်မေသန်းအား ရအောင်လိုက်ကာ လက်ထပ် ပေါင်းသင်းနေသည်။ ခြံတဝင်းထဲ အိမ်ခွဲ နေသော်လည်း ရေတွင်း တတွင်းထဲမို့ ဝင်းကို ရေချိုးတိုင်း ခင်စမ်းရီနှင့် ခဏတိုင်း ဆုံမိ၏။ တခါတခါ အဝတ်လျှော်ရင်း အောက်စလွတ်နေသော ခင်စမ်းရီ ပေါင်ကြားမှာ အဖုတ်လေးအား ဝင်းကို အတိုင်းသား မြင်နေရသည်။ အနီးကပ်မို့ အဖုတ် အောက်ဖက် ဖင်ကြားထိ ပေါက်နေသော အမွှေးနုလေးများပါ တွေ့နေရ၏။ ” ဟိတ် … အဲဒါ … ဘာလို့လဲ … ပြောလေ … ငါမေး နေတာ … မဖြေဘူး ” ခင်စမ်းရီ အသံကြားမှ ဝင်းကို အသိပြန်ဝင် လာပြီး အကြည့်ရွေ့ကာ ပိုက်ဆံ ခဏချေးရန် ပြောဆိုနေသည်။ ” ဟူးးးး …… နင့်လည်း …… ငါ မပြောချင်ဘူး … ဝင်းကို …… အချိန်ပြည့် … လောင်းကစား လုပ်နေတာ … ကဲ … ခဏစောင့် … ငါ အပေါ်တက်ယူ ပေးမယ် ” ခင်စမ်းရီ မှာ ဝင်းကိုအား မကြည်ဖြူ သော်လည်း ညီမ ဖြစ်သူ ယောက်ျားမို့ လင်မသိအောင် လက်သိပ်ထိုး ပေးနေမိ၏။
လင်ဖြစ်သူ စိုးမြင့်မှာ မယားညီကိုချင်း ဝင်းကိုအား ကြည့်မရပေ မယားဖြစ်သူ ခင်စမ်းရီအား မရောရန် ကြိတ်မှာထားသည်။ “ကျေးဇူးပဲ … မမရီ … ကျနော် … သွားဦးမယ် ” ” အေး “ခင်စမ်းရီ ကိုယ်လုံးလေး တုန်ကာ မျက်နှာလေး ရှုံ့မဲ့ နေ၏။ လင်ဖြစ်သူ စိုးမြင့် နှင့် ကိုစံတင့်တို့ အဖွဲ့ အိမ်ပေါ် အရက်သောက် နေရာ ဘေနား ထိုင်ပေးရင်း သေးပေါက်ချင် လာသဖြင့် အိမ်အောက် ဆင်းပေါက်ရာ အခက် တွေ့နေတော့သည်။ သေးပေါက်ပြီး အပြန် လှေကားနားတွင် ဝင်းကိုမှာ ပိုင်ဆိုးပိုင်နင်း မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေထားဖြင့် နူတ်ခမ်းချင်း ဆွဲစုပ်နေ၏်။ ” ဝင်းကို …… တော်တော့ဟာ … အပေါ်မှာ … ကိုစိုးမြင့်တို့ ရှိတယ် ” ” ကိုကြီးစိုးက … အရက် သောက်ရင် … ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ မယားမေ့ပါ … မမရီ ရယ် ” စကားဆုံးသည်နှင့် အဖုတ်အား ထမိန်အပြင်မှ လက်ဖြင့် ပွတ်ပေးပြန်သည်။ ခင်စမ်းရီ အသာလေး ကြိတ်ရုံးကာ သူမ အဖုတ်အား ပွတ်ပေးနေသော ဝင်းကို လက်အား ဆွဲဖယ်ပစ်၏။ ” ဒီလို … မလုပ်ပါနဲ့ … ဝင်းကိုရယ် … မကောင်းပါဘူး ” ” မမရီ … ညီမက … ကျနော့်ကို … အလိုး မခံဘူးဗျ … ၃ရက်ရှိပြီ … ခုလည်း … မမရီ … အမေနဲ့ သွားအိပ် နေတာ … ကျနော့် … စိတ်တွေ မရဘူးဗျာ “။
” ဟာ … အဲဒါ … နင်တို့ … လင်မယား ကိစ္စလေ … ငါနဲ့ … ဘာဆိုင်တုန်း … မလုပ်နဲ့ဟာ … ကိုစိုးမြင့် … သိသွား လိမ့်မယ် ” ” အဲဒါဆို … နောက်ဖေး သွားမယ်လေ … လာခဲ့ ” လက်ဆွဲ ခေါ်ရာ ခင်စမ်းရီ မှာ လှေကား ကွေ့မှ အိမ်ပေါ် မော့ကြည့်ရင်း ဝင်းကိုနောက် ပါလာခဲ့သည်။ ခြေတန်ရှည် အိမ်၏ အနောက်ဖက် အိမ်သာအနီးရှိ မန်းကျည်းပင်နားထိ ဆွဲခေါ်လာ၏။ ” ဒီနားဆို … ဘယ်သူမှ မမြင်ရဘူး … မမရီ ” မန်းကျည်းပင်အောက် အရောက် ဝင်းကိုမှာ ခင်စမ်းရီအား နူတ်ခမ်းချင်း ပြန်တေ့စုပ်ကာ အဖုတ်အား ပြန်ပွတ် နေသည်။ ခင်စမ်းရီမှာ ပေါင်တံများ စိရင်း မန်းကျည်းပင် အား ကျောမှီထားရ၏။ ” ဟင် … အရည်တွေ စိုနေပါ့လား ” ဝင်းကိုမှာ ထမိန်လှန်ပြီး ပွတ်လိုက်သဖြင့် လက်ချောင်း လေးများ စိုနေရာ ကပ်ပြောလိုက်သည်။ ” ဟမ် … ခုန … ငါ သေးပေါက် ထားတာလေ ” ” ဟုတ်လို့လား ” ပြောပြော ဆိုဆို ဝင်းကိုမှာ ခင်စမ်းရီရှေ့ ဒူးထောက် ထိုင်ကာ ပေါင်တံတဖက် ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်ပြီး အဖုတ်အား အောက်မှ ပင့်ယက်လိုက်၏။ ” ဟာ …… ငရဲ ငအုံတွေ … ကြီးပါ့မယ် … ဝင်းကိုရယ် … ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။
ကျွတ် ……… မလုပ်ပါနဲ့ ……… အ … ရှီး …..ဘယ်လိုကြီးလည်း ….. ဟင့် ” ဝင်းကိုမှာ ခင်စမ်းရီ စကားအား ဂရုမစိုက်တော့ အဖုတ် အက်ကွဲကြောင်းထဲ လျှာသွင်းကာ အထက်အောက် ဖိယက်ပစ်သည်။ တဖြည်းဖြည်း မာခဲပြီး ခေါင်းထောင် လာသော အစိလေးပါ ဆွဲစုပ်လိုက်၏။ ခင်စမ်းရီ အသံမထွက် နိုင်တော့ တခါမှ မခံစားဖူးသော အရသာ လေးထဲ မျောပါနေသည်။ ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံး လေပေါ် မြောက်တက်သွား သလိုလို ပြန်ကျ လာသလိုလိုနှင့် ဝင်းကို ဆံပင်အား ဆွဲဆုပ်ထားရ၏။ ကြာကြာ အယက် မခံနိုင်ခဲ့ပေ ပထမဆုံး အတွေ့ကြုံမို့ ၅မိနစ်ခန့် အကြာ ဝင်းကို၏ လျှာဖျားထိပ်၌ စောက်ရည်များ ပန်းထုတ် လိုက်ရတော့သည်။ ” ဖယ် … ဖယ် ……… ဖယ် တော့ ဟာ .. ဝင်း ကို…. ငါ .. မ ….. မ ..မ ရ တော့ ဘူး ဟ …ဟင့် ….. အား… ရှီး……. ထွက် ကုန် ပါ ပြီ ဟာ ” ခင်စမ်းရီ စောက်ရည်များ ပန်းသည်နှင့် ဝင်းကိုမှာ ထရပ် လိုက်သည်။ သို့သော် အရှိန်ဖြင့် ပန်းထွက်လာသော စောက်ရည်များမှာ ဝင်ကို ရင်ဘတ်အား ပန်းမိသွားရ၏။
မတ်တပ်ရပ်ပြီး သည်နှင့် ပုဆိုးအား စလွယ်သိုင်းရင်း ပေါင်တံ ၂ဖက် ဖြဲကာ မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေထားဖြင့် အဖုတ်ထဲ ဒစ်ကြီး ဖိသွင်းလိုက်၏။ ” ဟင့် ဟင့် …… နင် ပိုက်ဆံ လိုရင် … ငါ ကူညီပါ့မယ် … ဒီလိုကြီး … မလုပ်ပါနဲ့ ဟယ် ……… အအ …… နာလိုက်တာ ……… ဟင့် ” ခင်စမ်းရီ တယောက် မန်းကျည်းပင်အား ကျောမှီရင်း အိမ်ဘက် ငေးကာ ကြိတ်ပြောနေရသည်။ အသံကျယ်ကျယ် မပြောရဲပေ လူသိ သွားသည်နှင့် လင်မယား ကွဲကာ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း ဖြစ်ရမည်။ တောင်းပန်နေစဉ် ဝင်းကိုမှာ သူမ ခါးလေးအား လက်၂ဖက် ဖြင့် ဆွဲကာ လီးတဆုံး သွင်းပြီး ဆောင့်လိုး ပစ်တော့၏။ ငါတော့ သေတော့မယ် … ထင်တယ် … အား ……… အီး ……… ကျွတ်ကျွတ် ” ခင်စမ်းရီ မတ်တပ် အနေထားဖြင့် ဒူးများ ညွတ်ချင် လာသည်။ အရှိန်ဖြင့် လာလာဆောင့်သော ဝင်းကို လီးထိပ်မှာ သားအိမ်ဝ ထိမိသဖြင့် စောက်ပတ်အုံလေး ကျင်ကာ မခံစား နိုင်တော့ပေ။ ကြိတ်ခံနေစဉ် ဝင်းကို တယောက် မယားဖြစ်သူ အဖုတ်ထက် စီးပိုင်နေသော အဖုတ်အား အားရပါးရ ခါးဆွဲလိုးတော့၏။
” ဟင့် …… အမလေး …… သေပြီ …… သေပါပြီ…… နာလိုက်တာ ဟာ … အီးဟီး ” ” မငိုပါနဲ့ …… မမရီ ရယ် …… စောက်ဖုတ်လေးက … အရမ်းကောင်းတာပဲ …… လိုးလို့ ကောင်းနေလို့ပါ ” ဝင်းကိုမှာ တတွတ်တွတ် တောင်းပန်ရင်း အလိုး မပြတ်ပေ။ ခင်စမ်းရီမှာ လီးဒဏ် ခံနိုင်လာသည်နှင့် လီးအရသာ တွေ့နေသဖြင့် စိတ်ဆိုးရမည်လား ခွင့်လွှတ်ရမည်လား ဝေခွဲမရခဲ့။ လင်ဖြစ်သူနှင့် အိမ်ထောင်သက် ၂နှစ် အတွင်း ဒီလိုအရသာ တခါမှ မခံစားဖူးသေးပင်။ စိတ်ထဲ ရှက်စိတ် ၀မ်းနည်းစိတ်များ ရောကာ ဒွန်တွဲ ခံစား နေမိသည်။ စီးပွားရေးဘက် စိတ်ရောက်နေသော စိုးမြင့်နှင့် အိမ်ထောင်ဦး အစလို နေတိုင်း မလိုးဖြစ်တော့။ ၂ပတ် ၁ခါ လောက်သာ စိတ်ပါမှ တက်လိုးသော လင်ဖြစ်သူ စိုးမြင့် နောက်ဆုံး လိုးပေးခဲ့သည်မှာ ၁၀ရက် ကျော်လာခဲ့သည်။ ဒီနေ့ညမှ ဝင်းကို ဇွတ်အတင်း လိုးသဖြင့် ခံနေရ၏။ မလိုးခင် သူမအဖုတ်အား လျှာဖြင့် ထိုးထိုးယက်ရာ စောက်ရည်များ ပန်းထွက်ခဲ့ ရပြန်သည်။ အိမ်ထောင် သက်တမ်း တစ်လျှောက် လင်ဖြစ်သူတောင် ယက်မပေးခဲ့။ ဒီလို အယက်ခံရ ကောင်းမှန်းလည်း မသိခဲ့ပေ။
မရွံ မရှာဖြင့် သူမ စောက်ပတ်အား ယက်ပေး နေသည့် ဝင်းကိုအား ကြည့်ရင်း သနားသလိုလို အားနာ သလိုလို ဖြစ်မိသေး၏။ ခင်စမ်းရီ ရင်ထဲ လှိုက်တက် လာသည် ဖေါ်မပြနိုင်သော ခံစားချက်လေး ခံစား နေရသည်။ ” အားအား ……… ပြီး ……… ပြီး ……… ပြီးပြီ ……… မမရီ ရယ် ………… အင့် ” မနားတမ်း ဆွဲလိုးရင်း ၁၅ မိနစ် ကျော်ကျော်တွင် ဝင်းကိုမှာ ခင်စမ်းရီ အဖုတ်ထဲ လရည်များ ပန်းထည့် လိုက်တော့၏။ ” ကောင်းလိုက်တာ … မမရီ ရယ် … ကျနော် သွားတော့မယ် ” ” သွား … နင် ဒီကိစ္စ … ဘယ်သူ့မှ … ပြန်မပြောနဲ့နော် … ပတ်ဝန်းကျင် သိရင် … ငါရှက်လို့ … သေလိမ့်မယ် … ဟင့် ဟင့် ” ” အင်းပါ … မမရီ ရယ် ” ဝင်းကို ထွက်သွားမှ ခင်စမ်းရီ တယောက် ရေတွင်းဘက် လျှောက်လာကာ အဖုတ်အား ရေငင်ပြီး ဆေးကြော လိုက်သည်။၂ပတ်ခန့် အကြာ ညနေစောင်းတွင် ခင်စမ်းရီ တယောက် မြို့ပေါ် စပါးများ သွားပို့သော လင်ဖြစ်သူ စိုးမြင့် ပြန်လာသဖြင့် နွားလှည်းဖြင့် ကြိုရန် ထွက်လာခဲ့သည်။ စိုးမြင့်မှာ စပါး အထွက်ကောင်းသဖြင့် ထော်လာဂျီ ငှားကာ အခေါက်ခေါက် အခါခါ သွားပို့ပြီး အပြန် လိုင်းကားဖြင့် ပြန်လာရ၏။
ကားလမ်းမှာ ရွာဖြင့် ၂မိုင်ခန့် ဝေးသေး သဖြင့် ခင်စမ်းရီမှာ လင်တော်မောင် အမောပြေရန် သွားကြိုနေသည်။ ” မမရီ …… ဘယ်တုန်း … မှောင်တော့မယ် … ကျနော် အဖေါ်လိုက်ခဲ့မယ် ” ရွာလယ် အရောက် စကားသံနှင့် အတူ လှည်းပေါ် ခုန်တက် လာသော ဝင်းကိုအား တွေ့လိုက်ရ၏။ ” ငါ … ကိုစိုးမြင့် … သွားကြို မလို့ … မလိုက်နဲ့ဟာ … ပြန်ဆင်း ” ခင်စမ်းရီ လှည်းအား ခဏရပ်ကာ ပြောဆိုနေသည်။လွန်ခဲ့သော ၂ပတ်ခန့်မှ ဝင်းကို ဇွတ်လိုးလိုက် သဖြင့် ရှက်လဲရှက် မျက်နှာလည်း ပူကာ ရှောင်နေမိ၏။ ” ရပါတယ် … မောင်းပါ … တော်ကြာ … ကိုရီးစိုး … မြို့က ပြန်မလာသေးရင် … ကားလမ်းဘေး … မမရီ တယောက်ထဲ … ဖြစ်နေမှာ ” ဝင်းကို စကားမှာ အကျိုးကြောင်း ဆီလျော် နေသဖြင့် ခင်စမ်းရီ ဘာပြန် ပြောရမှန်း မသိတော့။ ရွာထဲ လမ်းသွား လမ်းလာ များမှာလည်း မရီးနှင့် မတ်မို့ အထွေအထူး စိတ်မဝင်စားကြ။ သက်ပြင်းချကာ ခင်စမ်းရီ နွားလှည်းအား မောင်းထွက် လာခဲ့သည်။ ရွာမှ လွန်လာသည် အထိ ဝင်းကိုမှာ လှည်းနောက်ဖျားတွင် ထိုင်နေပြီး ၁မိုင်ခန့် အကြာ သရက်တောထဲ အဖြတ် ဗွေဖေါက်လာ၏။
ညနေစောင်းမို့ နေလုံးကြီး မေးတင်ကာ သစ်ရိပ်များ ကြားမှ နေရောင် ဖျော့ဖျော့လေး ၁ပြောက် ၂ပြောက်သာ ကျရောက်နေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမှောင်ထု ကြီးစိုး နေသည်။ ဝင်းကိုမှာ လှည်းနောက်ဖျား မှ တင်ပလင် ခွေထိုင် နေသော ခင်စမ်းရီ နောက်ကျောဘက် ခြေဆင်း ခွထိုင် လိုက်သည်။ ” မမရီ …… ကျနော့်ကို … ဘာလို့ ရှောင်နေတာလဲ ဟင် ” ပြောလဲပြော ခါးအား သိုင်းဖက်ကာ ရင်ဖုံး အင်္ကျီလည်ပင်း နားမှ ပေါ်နေသော လည်ပင်းနှင့် ပုခုံးကြား နေရာ လေးအား နူတ်ခမ်းဖြင့် စုပ်ယူလိုက်သည်။ ” ဟာ …… လုပ်ပြန်ပြီဟာ …… အ ……… ယားတယ်ဟ … ငြိမ်ငြိမ် နေ …… မလုပ်နဲ့ ” ခင်စမ်းရီမှာ ရုတ်တရက် နှုတ်ခမ်း အထိအတွေ့ဖြင့် နွေးကနဲ့ ဖြစ်ကာ ဝင်းကို၏ နှုတ်ခမ်းမွှေး ငုတ်တိုများကြောင့် လည်ပင်းတဝိုက် ယားတက်လာ၏။ တဆက်ထဲ ဖင်ကြား ထောက်မိနေသော ဝင်းကို၏လီးကြီး မာလာသည်ကို ခံစား သိရှိလိုက်သည်။ သရက်တောထဲ လူသွားလူလာ မရှိသလောက် တိတ်ဆိတ်နေကာ ညအိပ်တန်း ဝင်ရန် ဆူညံနေသော ကျေးငှက်သံများနှင့် လှည်းဘီးမှ ထွက်နေသော တကျွီကျွီ တအီအီ အသံများသာ ထွက်ပေါ် နေ၏။
” ကျွတ် …… ဝင်းကို …… တော်တော့ဟာ …… အရင် တခါလည်း …… ငါ့ကို …… အားရအောင် … လုပ်ပြီးပြီ မလား … တယောက်ယောက် မြင်သွားရင် … နင်ရော ငါရော …… အရှက်ကွဲပြီး …… အိမ်ထောင်ရေးပါ … ပျက်စီးမှာ ” ” အင်းပါ … ကျနော် … အဲကိစ္စ …… ဘယ်သူ့မှ မပြောပါဘူး …… မမရီက …… တအား လှတော့ … အပျို ကတည်းက … စွဲလမ်း နေတာပါ ” ” ဟင် …… နင် …… နင် ……… ငါ့ကို …… အရင် ကတည်းက …… စိတ်ဝင်စား နေတာလား ” ” ဟုတ်တယ် …… ကျနော်က …… လူပေ လူတေမို့ …… မမရီ နားလေး … မကပ်ရဲတာပါ …… အဲတာမို့ …… တင်မေသန်းကို … ရအောင်လိုက်ပြီး … မမရီ နားလေး … အနီးကပ် နေရအောင် … လက်ထပ် လိုက်တာပါ ” ဟုတ်သည်ရှိ မဟုတ်သည်ရှိ ဝင်းကို၏ စကားလုံး များမှာ ခင်စမ်းရီ အတွက် ဘဝင်ကျသွား ရသည်။ လင်ဖြစ်သူ စိုးမြင့်နှင့်တောင် လက်ထပ်ပြီး နောက်ပိုင်း ချစ်ကြောင်း ကြိုက်ကြောင်း မပြောဖြစ်ခဲ့ အချိန်ပြည့် စီးပွားရေး အကြောင်းသာ ပြောဆိုနေဖြစ်၏။ ဝင်းကိုမှာ စကား ပြောရင်း နောက်မှ ထိုင်လျက် အနေထားနှင့်ပင် လည်ပင်း သားလေးအား ဘယ်ညာနမ်းလိုက် ဆွဲစုပ်လိုက် ပြုလုပ် နေသည်။
တဖြည်းဖြည်း မာထင်လာသော လီးထိပ်ဖြင့် ခင်စမ်းရီ ဖင်သားစိုင်အား ဖိထိုးကာ နောက်မှ သိုင်းဖက် ထားသော လက်တဖက်မှာ ထမိန် အပေါ်မှ ပေါင်ဂွ လေးထဲ နိူက်ပွတ်ပေး၏။ ” အ ……… တော်ပါတော့ ဟာ … အင်းဟင်း ……… ခုချိန် … ငါတို့က …… အိမ်ထောင်သည် တွေလေ …… ဆင်ခြင်နေရမှာ … နင့်အတွက်လည်း မကောင်းဘူး …… ငါ့ အတွက်လည်း မကောင်းဘူး” ပါးစပ်က ငြင်းနေသော်လည်း သိသိသာသာ ရုန်းကန်ခြင်း မလုပ်မိတော့။ လင်ဖြစ်သူ ဆီမှ တခါမှမရဖူးသော ကာမ အထိတွေ့ များအောက် မသိစိတ်မှ သာယာနေမိ၏။ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေနေကြည့်ကာ ဝင်းကိုမှာ တဆင့် တက်လိုက် ပြန်သည်။ နောက်ကျောဘက် ပေါင်ဖြဲ ထိုင်နေရာမှ ညာဘက်ဘေး ရွေ့ထိုင်ကာ ခင်စမ်းရီ၏ တင်ပလင် ခွေထိုင်နေသော ပေါင်တံအား ဆွဲဖြဲ လိုက်၏။ ပေါင်တံများ ပြဲလာသည်နှင့် ဘေးတိုက် အနေထားဖြင့် ထမိန်အောက် ခေါင်းတိုးဝင်ကာ အဖုတ်အား အငမ်းမရ ယက်ပေးတော့သည်။ ” အိုရ် …… လုပ်ပြန်ပြီဟာ …… ပြောမရဘူး …… အ ……… အအ ……… ရှီးးးး ……… ကျွတ် ” ခင်စမ်းရီမှာ ပေါင်တံ၂ဖက် မသိမသာ ထပ်ဖြဲပေးရင်း ထမိန်ပေါ်မှ ဝင်းကို ခေါင်းအား ကိုင်ကာ ပေါင်ခြံထဲ ဖိကပ် ထားမိ၏။
လှည့်းပေါ်တွင် ပေါင်ဖြဲ ထိုင်လျက် အနေထားဖြင့် ဖင်ကြီး လူးလွန့်နေရသည်။ ခုချိန် ကားလမ်း ဘေးနားလေး အမြန်ရောက်သွားမှာ စိုးရိမ် နေတော့၏။ သရက်ပင် ခပ်ကြီးကြီး အပင်အောက် အရောက် နွား၂ကောင်အား အနားပေးသလိုနှင့် လှည်းအား ဘေးကပ် ရပ်ပစ်လိုက်သည်။ ” မမရီ … ဒီချိန် …… လူသွား လူလာ မရှိဘူးရယ် … လှဲအိပ်လိုက် ” ” မြန်မြန် လုပ်နော် ” ခင်စမ်းရီ တယောက် အထိအတွေ့အောက် မျောပါသွားရာ ကာမသွေးများ ထိန်းမရတော့ပေ။ ဝင်းကို စကားအဆုံး လှည်ပေါ်တွင် ပက်လက် လှဲချပစ်သည်။ ခင်စမ်းရီ လှဲလိုက်သည်နှင့် ဝင်းကိုမှာ ထမိန် ဆွဲချွတ်လိုက်၏။ ” ဟင် …… ဘာလို့ …… ချွတ်မှာလည်း …… ဒီတိုင်း …… လုပ် …… လုပ် …… ……… ” ခင်စမ်းရီ ကာမ မီးတောက်လေး တောက်လောင် နေသော်လည်း သူစိမ်းယောက်ျားရှေ့ ဖင်တုံးလုံး ခံရန် မဝံမရဲ ဖြစ်နေမိသည်။ လင်ဖြစ်သူ စိုးမြင့်နှင့်တောင် ထမိန်အား ဆီးခုံးပေါ်ရုံလေး လှန်ခံတတ်၏။ သို့သော် ဝင်းကိုမှာ ဇွတ်ဆွဲ ချွတ်နေသဖြင့် လှည်းပေါ် ခင်းထား သော ဝါးကြမ်းကပ်ဖြင့် ညှိကာ ထမိန်ပြဲမှာ စိုးရိမ်ကာ ဖင်ကြီး ကြွပေးလိုက်ရသည်။
ထမိန် ကျွတ်သည်နှင့် ပေါင်ဂွထဲ ဖေါင်းကြွနေသော အဖုတ်လေးအား ဝင်းကိုမှာ တပြတ်ပြတ် ယက်ရင်း မာခဲလာသော အစိလေးပါ ဆွဲစုပ် ပစ်၏။ နေရောင် ဖျော့တော့တော့ လေးထဲ ခင်စမ်းရီ ခေါင်းထောင် ကြည့်ရာ သူမပေါင်ဂွထဲ ဝင်းကို တယောက် မရွံမရှာဖြင့် စောက်ပတ်အား ယက်နေရုံ မက စိမ့်ထွက် လာသော စောက်ရည်များပါ စုပ်ယူမျိုချ နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ခင်စမ်းရီ အသိတရားများ ပျောက်ကွယ်ကုန်၏။ ဒီချိန် လက်တော်မောင် ရောက်လာလျင်တောင် မရပ်ချင်တော့။ ပိုဆိုးသည်က ဝင်းကို လျှာထိပ်လေးမှာ အဖုတ်ဝ အောက်ဖက်ရှိ ဖင်ဝလေးထဲ တိုးဝင်လာသဖြင့် အသဲတွေ အူတွေ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကာ ပက်လက် အနေထားဖြင့် ခြေဖျားထောက်ပြီး အဖုတ်လေး ကော့ပေးလိုက်တော့၏။ ထူးကဲသော ကာမ စည်းစိမ်အောက် ကြာကြာ မထိန်းနိုင်ခဲ့ စိတ်လျော့လိုက် သည်နှင့် အဖုတ်ဝထဲမှ စောက်ရည်များ သေးပန်းသလို ထောင်ပန်းကာ ဝင်းကို မျက်နှာအား ရွှဲနှစ် သွားစေသည်။ ဒီတကြိမ် ထူးထူးခြားခြား ခင်စမ်းရီ လက်လေး ၂ဖက်မှာ ဝင်းကို ခေါင်းအားဖမ်းဆွဲရင်း သူမ အဖုတ်လေးနှင့် ဝင်းကိုပါးစပ်အား လွတ်ထွက် သွားမှာ စိုးရိမ် နေသရောင် ဆွဲကပ်ထားတော့၏။
” အားးး……… အားး… သေပြီ ….. သေပြီ …… အမလေး…… ကောင်း လိုက် တာ ဟာ ” ဝင်းကိုမှာ အရည်များ ပန်းထွက်နေသော အဖုတ်အား မလွတ်တမ်း ဖိယက်ပေးနေသည်။ အရည်များ ကုန်စင်မှ ခင်စမ်းရီ အဖုတ်ထဲ လီးသွင်းကာ စိတ်တိုင်းကျ ဆောင့်လိုးတော့သည်။ ခင်စမ်းရီ တချီ ပြီးထားသော်လည်း ကာမစိတ်များ ရပ်မသွားပေ။ ပက်လက် အနေထားဖြင့် အောက်မှ ဖင်ကြီး ဝေ့ကာဝိုက်ကာနှင့် နှဲ့ပေးနေ၏။ ” မမရီ …… လေးဖက် ကုန်းလိုက်နော် ” ဒီအခြေအနေ ရောက်မှ ခင်စမ်းရီ ရှက်ကြောက် မနေတော့ ချွတ်ထားသော ထမိန်အား အရှည်လိုက် ခေါက်ကာ ဒူးအောက်ခံရင်း ဝင်းကို စိတ်တိုင်းကျ လှည်းပေါ်တွင် လေးဖက် ကုန်းပေးလိုက်၏။ ၁၅မိနစ် ကျော်ကျော်တွင် ပြင်းထန်သော လိုးချက် များအောက် ခင်စမ်းရီမှာ ဒုတိယ အကြိမ် အရည်များ ပန်းထုတ်ပြီး ခဏအကြာ ဝင်းကိုပါ အထွဋ်ထိပ် ရောက်ရှိသွားသည်။ ၂ယောက်သား ခဏ အမောဖြေကာ နွားလှည်းလေး မောင်းထွက် လာခဲ့ကြ၏။ ကားလမ်း အစပ်သို့ ရောက်သော် စိုးမြင့်မှာ အထုပ်လေး ၂ထုပ်ဖြင့် ရွာလမ်းဘက် လျှောက်လာ နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ညဘက် လူခြေတိတ်ချိန် ဝင်းကိုတယောက် မယားဖြစ်သူ အိပ်ပျော် နေသည်ကို သေချာအောင် ကြည့်ရင်း နောက်ဖေးပေါက် အသာဖွင့်ကာ အိမ်သာ သွားသလိုလိုနှင့် တဖက်အိမ်၏ အနောက်ဖက် မန်းကျည်းပင်နား လျှောက်လာခဲ့သည်။ မန်းကျည်းပင်အောက် အမှောင်ထဲ မတ်တတ်ရပ် စောင့်နေသော ခင်စမ်းရီအား တွေ့လိုက် ရ၏။ ” စောင့်နေတာ ကြာပြီလား … မမရီ ” ခပ်တိုးတိုး ပြောကာ ထမိန်အပေါ်မှ ပေါင်ကြားထဲ နှိုက်ပွတ် ပေးလိုက်သည်နှင့် ခင်စမ်းရီ မှာလည်း ဝင်ကို လီးအား ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ် ပေးနေ၏။ ” နင့်မိန်းမ … ညနေက … မြင်လိုက်တယ် … အိမ်ပြန် ရောက်နေတာလား ” ” အင်း … မြန်မြန် လိုးရအောင် … မမရီ … သူအိပ်တုန်း ထွက်လာတာ ” ” အေးပါ … လိုးလေ ” စကားအဆုံး ခင်စမ်းရီမှာ ထမိန်လှန်ပြီး ခြေဖျား ထောက်ကာ ပေါင်ကား ပေးလိုက်သည်။ ဝင်းကိုမှာ လိုးနေကြ ပုံစံအတိုင်း မျက်နှာချင်းဆိုင် မတ်တပ် ရပ်လျက် အနေထားဖြင့် ဆွဲလိုးနေ၏။ ထိုချိန် စိုးမြင့်မှာ တရေးနိုး အာခြောက်နေသဖြင့် ရေထသောက်ရင်း သေးပေါက်ရန် အိမ်အောက်ထပ် ဆင်းလာခဲ့သည်။
မန်းကျည်းပင်နား အရောက် ညည်းသံသဲ့သဲ့ ကြားရသဖြင့် မျက်မှောင် ကြုံ့သွားရသည်။ အမှောင်ထဲ အားစိုက် ကြည့်ရာ မတ်တတ် လိုးနေကြသည့် လူရိပ် ၂ရိပ်အား တွေ့လိုက်ရ၏။ မှောင်နေသော်လည်း ထွက်ပေါ်နေသော အသံမှာ မယားဖြစ်သူ အသံမှန်း သိလိုက်ရသည်။ ဝုန်းကနဲ့ ဒေါသ ဖြစ်မိသော်လည်း အိမ်ထောင်ရေး သုခ အပြည့်ဝ မပေးနိုင်သော အဖြစ်အား တွေးမိပြီး ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် ဆက်ချောင်း ကြည့်နေမိ၏။ စိတ်ပါ လက်ပါ မတ်တပ်ရပ်လျက် အနေထားဖြင့် ထမိန်အား မကာ ခါးကော့ခံနေသော မယားဖြစ်သူ အပေါ် စိတ်မဆိုးပဲ တဖြည်းဖြည်း သနားစိတ်လေး ဝင်လာခဲ့သည်။ ပေါင်ကြားထဲ မတောင်တာ ကြာပြီ ဖြစ်သော လီးမှာ သိသိသာသာ တင်းမာလာ၏။ လီးအား ပုဆိုးအပြင်မှ အုပ်ကိုင်ရင်း မြင်ကွင်းအား အားစိုက် ကြည့်နေမိသည်။ ဝင်းကိုနှင့် ခင်စမ်းရီမှာ အထိအတွေ့ အောက် မျောနေသဖြင့် ခပ်လှမ်းလှမ်း စိုးမြင့် ရောက်နေသည်ကို သတိမထား မိတော့ပေ။ ” အအ …… ပြီးတော့မယ် …… ဆောင့်ဆောင့် …… ဝင်းကို ” ခင်စမ်းရီ အံကြိတ်သံလေး ထွက်ပေါ်လာပြီး တအအ တရှီးရှီးဖြင့် ၂ယောက်သား ခဏအကြာ ငြိမ်သွား တော့သည်။
” ကောင်းတာ … မမရီ ရယ် …… လိုးရတာ …… မဝဘူး ” ” ဒီည …… တော်တော့ဟာ … ကိုစိုးမြင့် ရော … နင့်မိန်းမ ရော …… ရှိတယ် ” ခင်စမ်းရီ စကားပြောရင်း မထားသော ထမိန်အား ပြန်ချကာ ပေါင်ကြားမှ အရည်များအား သုတ်ပစ်လိုက်၏။ ” နက်ဖန် …… နေ့လည် … ကျနော် လာမယ် … စောင့် နေနော် ” ” အင်းပါ … ၁၂နာရီ လောက်ဆို … ကိုစိုးမြင့် …… မြို့ တခေါက် သွားဦးမှာ ” ” ဟုတ် … ခု … လီးကြီး ပေပွနေတာ … သန့်ရှင်း ပေးဦးလေ ” ” ဟွန့် …… ခုလေး လိုးပြီးတာကို … အားမရ နိုင်ဘူး ” ပြောပြောဆိုဆို ခင်စမ်းရီမှာ မြေကြီးပေါ် ဒူးထောက် ထိုင်ရင်း စောက်ရည်များ ပေကပ်နေသော ဝင်းကို လီးအား ပြောင်နေအောင် စုပ်ပေး လိုက်တော့သည်။ မြင်ကွင်းကြောင့် မြင့်စိုးစိတ်ထဲ ဝမ်းနည်းလာကာ ဆုပ်ကိုင်ထားသော လီးအား အမှတ်မထင် စွလိုက် မိသည်။ ခါးတချက် တွန့်ကာ လရည်များ ဗျစ်ကနဲ့ ပန်းထွက်လာ၏။ မယားဖြစ်သူ ခင်စမ်းရီမှာ ဝင်းကို လီးအား ပါးစပ်ထဲမှ ထုတ်ကာ ဒစ်ကြီးအား တရှုံ့ရှုံ့ နမ်းပြီးမှ ထရပ်လိုက်သည်။ မြင့်စိုး တယောက် မှောင်ရိပ်ထဲ နောက်ပြန်လှည့်ကာ အိမ်ပေါ် ပြန်တက် လာခဲ့သည်။ ခင်စမ်းရီ တက်လာမှ ခုမှနိုးသည် ပုံစံဖြင့် သေးဆင်း ပေါက်လိုက်တော့၏။
” စမ်းရီ ရေ … ငါ သွားပြီဟေ့ … ညနေ မိုးချုပ်ရင် … ချုပ်မှာ … ထမင်းစာရင် … စားထားနှင့် … မစောင့်နဲ့ ” ” အမ် … မြို့ပေါ်တင် မလား … လျှောက်မသွားနဲ့ နော် …… စပါးဖိုး ယူပြီး … ရွာတန်းပြန်ခဲ့ ” ” အေးပါ … စမ်းရီ ရ … တခါတခါ … ပိုက်ဆံ ထုတ်တာ … လူများရင် ကြာတယ် ဟ ” မနက် လင်းသည်နှင့် စိုးမြင့်မှာ မယားဖြစ်သူအား ပြောပြီး လှည်းပေါ်တက်ကာ နွား၂ကောင်အား ကြိမ်တို့ရင်း ထွက်ခွာ သွားတော့သည်။ ခင်စမ်းရီ မနက်ပိုင်း အိမ်မှု့ကိစ္စများ ပြီးသည်နှင့် နေ့ခင်းဘက် အိမ် အောက်ထပ်တွင် မြေပဲများ ထိုင်ရွေးနေသည်။ ရင်ဖုံးအင်္ကျီ အပါးလေးနှင့် တင်ပလင် ခွေထိုင်နေရာ ထမိန် အဟောင်းလေးထဲ ခါးအောက် ဖင်ကြီးမှာ အိကား နေသည်။ ဝင်းကိုတယောက် မနက်ကတည်းက တဖက်အိမ်အား လူရိပ်လူခြေ ကြည့်ကာ ချောင်းနေရာ နေ့ခင်းဘက် စိုးမြင့် လှည်းထွက်သွားသည်နှင့် အိမ်၏ အနောက်ဖက်မှ ပတ်ကာ ခင်စမ်းရီနား ရောက်ရှိလာ၏။ ” မမရီ … ကိုရီးစိုး … သွားပြီမလား ” ဘေးနား ကပ်ထိုင်ရင်း ကြမ်းပြင်ပေါ် ကားထွက်နေသော ဖင်သားစိုင်အား ပွတ်သပ်ကာ မေးနေသည်။
” အင်း … နင့် မိန်းမရော … မရှိဘူးလား ” ” ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့ … မနက် ကတည်းက … အမေတို့ အိမ် … သွားပြီ ” ဝင်းကိုမှာ ညပိုင်း မန်းကျည်းပင်အောက် လိုးရသည်မှာ အားမရသည့်ဟန်နှင့် ဘေးတိုက် အနေထားဖြင့် ထမိန်အား ပေါင်ရင်း ဆွဲလှန်လိုက်၏။ ထမိန် အောက်နားစလေး ပေါင်ရင်း ကပ်သွားသည်နှင့် ပေါင်တံ တုတ်တုတ်ကြားထဲ အမွှေးများ ဖုံးနေသော စောက်ပတ်လေး ပေါ်ထွက်လာသည်။ ” ဟာ …… အိမ်ပေါ်သွားမယ် … အောက်က … လူမြင်ကွင်းကြီး ” ” အင်း … လီးစုပ် ပေးဦးနော် ” ” ဒါပဲ … ဟွန့် ” ခင်စမ်းရီမှာ လင်ရှေ့ ဝင်းကိုအား အရောမဝင် သော်လည်း လင်ကွယ်ရာ ဝင်းကို၏ မယားသဖွယ် အစွမ်းကုန် လိုက်လျောပေးသည်။ အိမ်ပေါ် ရောက်သည်နှင့် အိပ်ခန်း တံခါးစေ့ရာ ဝင်းကိုမှာ မင်္ဂလာဦး လက်ဖွဲ့ကုတင်ပေါ်တွင် ပုဆိုးချွတ်ပြီး ကုတင်စောင်း ဖင်တုံးလုံးထိုင်နေ၏။ လင်ဖြစ်သူ လီးထက် ကြီးမားတုတ်ခိုင်သော ဝင်းကို လီးအား မြင်သည်နှင့် မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ကာမစိတ် ကြွလာကာ ပါးလေး ခွက်ဝင်နေအောင် စုပ်ပေးလိုက်သည်။ လီးစုပ်ရင်း လက်တစ်ဖက်က အငြိမ်မနေပေ လဥ၂လုံးအား ဆုပ်နယ်ပေးပြန်၏။
” ကောင်းလိုက်တာ … မမရီ ရယ် … ပါးစပ်ထဲ … ပြီးလိုက်မယ် … ဒီတခါ ထွေးမပစ်နဲ့ နော် … လရည်တွေ မျိုချလိုက် …… အင့် …… ဇွိ …… ဖပ် …… ဗွပ် ” ဝင်းကို သင်ပေးထားသဖြင့် ခင်စမ်းရီ လီးစုပ် တတ်သည်မှာ သိပ်မကြာသေးပေ။ ပါးစပ်အား လီးဖြင့် လိုးပေးသည် ကိုလည်း နှစ်ချိုက် နေမိသည်။ ပါးစပ်ထဲ လီးတန်းလန်းမို့ ခင်စမ်းရီ စကား ပြန်မပြောနိုင်ပေ မျက်လုံးလေး မှိတ်ကာ ခေါင်းလေး ငြိမ့်သည် ဆိုရုံလေး လုပ်ပြလိုက်၏။ ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်လျက် အနေထားဖြင့် လီးစုပ် ပေးနေသော ခင်စမ်းရီ ပါးစပ်လေးအား ကြည့်ကာ ဝင်းကိုမှာ ကုတင်းစောင်း ထိုင်ရင်း ကာမစိတ်များ ကြွတက် လာတော့၏။ ” အင့် ……… စုပ် စုပ် ………… ရှီးးးးးး ……… အားဟား ……… ကောင်းတယ် ” အားမလို အားမရဖြင့် ကုတင်စောင်း ထိုင်နေရာမှ ကြမ်းပြင်ပေါ် ထရပ်ကာ ခင်စမ်းရီပါးစပ်အား ဆွဲလိုး ပစ်သည်။ ပါးစပ်လေး အလိုးခံရင်း ခင်စမ်းရီမှာ နူတ်ခမ်းဒေါင့်မှ အကျိအချွဲများ ထွက်လာကာ မျက်ရည် ဝဲလာရှာ၏။ ပါးစပ်အား ဒူးထောက် အလိုးခံရင်း ကြမ်းပြင်ပေါ် ပက်လက်လှဲချရာ ဝင်းကိုမှာ အလိုက်သင့် ခင်စမ်းရီ မျက်နှာအား ခွကာ ပါးစပ်အား ဖိလိုးတော့သည်။
ခင်စမ်းရီ အသက်ရှု ကြပ်ကာ မျက်လုံး ပြူးထွက် လာသည်။.လီးကြီးမှာ ပါးစပ်ထဲ မဆန့်မပြဲ ဖြစ်ကာ အာခေါင် လာလာထောက်သဖြင့် ခဏတိုင်း ပျို့တက် နေ၏။ ဝင်းကိုမှာ လည်ပင်းအတွင်းသား အပျော့လေးအား လိုးနေရာ မရပ်နိုင်တော့ ခင်စမ်းရီ ခေါင်းအား ဖိကာ အဆက်မပြတ် လိုးရင်း လရည်များ ပန်းထည့် လိုက်တော့သည်။ ” အားးးး ……… ရှီးးးးးး ……… ထွက် ……… ထွက် ………… ထွက်ပြီ ……… မမရီ ……… မျိုချနော် ” လှမ်းသတိ ပေးရင်း လရည်များ ညှစ်ထုတ်ရာ ခင်စမ်းရီမှာ ပက်လက် အနေအထားနှင့် ၀င်လာသမျှ လရည်များအား တဂွတ်ဂွတ် မျိုချပစ်ရသည်။ ” အင်း …… ရပြီ ရပြီ …… ဟူးးးး ရှီးးးးးး ” ဝင်းကိုမှာ လရည်များ ကုန်စင်မှ လီးအား ဆွဲထုတ်ကာ ထရပ်ရင်း ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လှန် လှဲလိုက်၏။ ခင်စမ်းရီမှာ ကြမ်းပြင်ပေါ် ပက်လက် အနေအထားဖြင့် ချက်ချင်း မထနိုင်သေးပေ။ နူတ်ခမ်းတဝိူက် ပေကပ် နေသော လရည်နှင့် အကျိအချွဲများအား လက်ခုံဖြင့် သုတ်ကာ အသက်ဝအောင် ရှုနေရသည်။ ခဏ အကြာမှ ထရပ်ကာ မှိန်းနေသော ဝင်းကို၏ လီးအား ပြန်မာ လာအောင် ထပ်စုပ်ပေးနေ၏။
” ဝင်းကို …… မမရီကို … လိုးပေးဦးလေ ” ၁၀မိနစ်ခန့် စုပ်ပေးပြီးသည်နှင့် မာထင်လာသော လီးအား ဂွင်းတိုက်ပေးရင်း တောင်းဆို လိုက်ပြန်သည်။ ” မမရီ …… အပေါ်က … တက်လိုးလေ ” ဝင်းကိုမှာ ပက်လက် အနေထားဖြင့် ကုတင်ပေါ် ဇိမ်ခံရင် ပြန်ပြောနေသည်။ ခင်စမ်းရီ အဖုတ်လေး အရည်စိမ့် ထွက်ကာ လီးဆာနေသဖြင့် ဟန်မဆောင် နိုင်တော့။ ထရပ်ရင်း ထမိန်ချွတ်ကာ လီးထိပ်ပေါ် အဖုတ်ဝလေး တေ့ကာ ဖိထိုင်ချလိုက်ရ၏။ အဖုတ်ထဲ လီးဝင်လာမှ နေသာထိုင်သာ ရှိလာရသည်။ ၁၀ချက်ခန့် ပုံမှန်လေး အထုတ်သွင်း လုပ်ရင်း လီးဝင်လီးထွက် ကောင်းလာ သည်နှင့် အားရပါးရ ဆောင့်ပေးနေမိ၏။ ရွာထဲ နေခင်းဘက် လူခြေတိတ် နေသဖြင့် စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ် တအအ တအီးအီး ညည်းကာ ဆောင့်ချ ပစ်သည်။ စိတ်တိုင်းကျ လိုသလို ဆောင့်နေရင်း မိနစ်၂၀ ကျော်ကျော်တွင် ၂ယောက်သား ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် သုတ်ရည်များ ပန်းထုတ် လိုက်တော့၏။ထိုချိန် မြို့သွားချင်ဟန်ဆောင်ပြီး အိမ်ပြန်လာသော စိုးမြင့်အား ခင်စမ်းရီရော ဝင်းကိုပါ သတိမထား မိခဲ့။
စိုးမြင့်မှာ ညပိုင်း မယားဖြစ်သူ ခင်စမ်းရီ၏ နေ့လည်ဘက် သူမရှိချိန် ချိန်းလိုးရန် ပြောနေသော စကားအား ကြားယောင်ကာ ရွာထိပ်တွင် နွားလည်းအား ထားပြီး နွား၂ကောင်အား အပင်ရိပ်တွင် ချည်ရင်း အိမ်သို့ ခြေချင် လျှောက်လာခဲ့သည်။ အိမ်ပေါ်တက်ကာ အသံမပေးပဲ ထရံကြားမှ ချောင်းကြည့်နေရာ မယားဖြစ်သူမှာ ပြီးသွားသည်နှင့် ဖင်အားကြွကာ ဘေးနားလှဲချစဉ် ဝင်းကိုလီးအား မြင်လိုက်ရ၏။ မယားဖြစ်သူ အဖုတ်ထဲမှ ထွက်လာသော လီးကြီးမှာ စောက်ရည်များနှင့် ထောင်မတ် နေဆဲပင်။ တိုတ်ခိုင် ထွားကြိုင်းသော ဝင်းကိုလီးကြီးအား ကြည့်ရင်း မယားဖြစ်သူ ခင်စမ်းရီ စွဲလမ်းသွားကြောင်း ချက်ချင်း နားလည်မိ၏။ ရွာထဲ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ထွန်းကြိုင် သတိပေးတုန်း အလေး မထားခဲ့သဖြင့် နောင်တရနေရှာသည်။ ပက်လက်လှန် လှဲနေသော ခင်စမ်းရီ အဖုတ်မှ ဝင်းကို လရည်များမှာ ဖင်ကြားထဲထိ စီးကျနေသည်။ မယားဖြစ်သူ၏ အရည် ရွှဲနေသော စောက်ပတ်အား အိမ်ထောင်သက်တမ်း တလျှောက် ခုမှ နေခင်း ကြောင်တောင် မြင်ဖူးရသည်။ လရည်များ လျှံကျနေရင်း စောက်ခေါင်း အတွင်းသား နီနီလေးပါ မြင်နေရ၏။
ထိုချိန် ဝင်းကိုမှာ ထထိုင်ပြီး ဒူးထောက်လျက် အနေထားဖြင့် ပက်လက် မှိန်းနေသော ခင်စမ်းရီ၏ ရင်ဘတ်ပေါ် ခွလိုက်ပြန်၏။ စိုးမြင့် နားမလည် နိုင်အောင် ကြောင်သွား ပြန်သည်။ ဘာများ လုပ်မလို့ပါလိမ့်ဟု တွေးနေတုန်း ဝင်းကိုမှာ စောက်ရည်နံ့ လရည်နံ့များ တထောင်းထောင်း ထနေသော လီးအား ခင်စမ်းရီ ပါးစပ်နား တေ့ပေး လိုက်၏။ အသန့်ရှင်း ကြိုက်သော မယားဖြစ်သူ ခင်စမ်းရီမှာလည်း သူမ မဟုတ်သလိုပင် အကျိအချွဲများ ကပ်နေသော ဝင်းကို လီးအား မက်မက်မောမော စုပ်ပေး နေပြန်သည်။ ဝင်းကိုမှာ ခင်စမ်းရီ မျက်နှာလေးအား ရွှန်းရွှန်း စားစား ကြည့်ကာ ပါးစပ်ထဲ လီးအား အရင်းထိ ထိုးသွင်းပစ်၏။ ပါးစပ်ထဲ လီးတံကြီး မဆန့်မပြဲ ဝင်သွားသဖြင့် စိုးမြင့်မှာ ကြည့်ရင်း စိတ်မသက်သာ သော်လည်း ခင်စမ်းရီမှာ မျက်ခုံးကြော၂ဖက် တွန့်သွားရုံမှ အပ အခက်အခဲ မရှိပေ။ ခေါင်းလေးမော့ကာ ပါးစပ်အား အလိုးခံနေ ပြန်သည်။ ခဏအကြာ ခင်စမ်းရီ ပါးစပ်ထဲ ဝင်းကိုလီးမှာ ပြန်လည် မာကျောလာ၏။ ” ရှီးးးးး ……… ရပြီ ……… မမရီ ……… ဝမ်းလျား မှောက်လိုက် ” ဝင်းကိုမှာ ခင်စမ်းရီ ပါးစပ်ထဲမှ လီးအား ပြန်ဆွဲထုတ်ရင်း ထရပ် လိုက်သည်။
ခင်စမ်းရီမှာ မတ်တပ် ရပ်ထားသော ဝင်းကို ခြေ၂ချောင်းကြား ခန္ဓာကိုယ်အား ၁ပတ်လှည့်ကာ မှောက်ရင်း ဖင်ကြီး ကော့ပေးနေ၏။ ဝင်းကို တယောက် ခြေ၂ဖက်အား နောက်အနည်းငယ် ဆုတ်ကာ ခင်စမ်းရီ၏ ဖင်အနောက်နား ပေါင်ရင်းပေါ် ထိုင်ချလိုက်သည်။ ဖင်ဝလေးနှင့် စောက်ဖုတ်အုံပေါ် စီးကပ်နေသော လရည်များအား ဒစ်ဖြင့် ဖိပွတ်နေ၏။ တဆက်ထဲ ဖင်နှစ်ခြမ်း ဖြဲကာ တံတွေးထွေးချရင်း ဖင်ဝ နီညိုလေးထဲ လီးထိပ် ဖိသွင်းလိုက်သည်။ ” ဟင် …… အပေါက်မှားမယ် …… ဝင်းကို ” ” မမှားပါဘူး … မမရီ ရယ် …… ဖင်ကို လိုးပေးမလို့ပါ ” ခဏအကြာ ခင်စမ်းရီ၏ အော်သံလေး ငယ်သံ ပါနေ တော့သည်။ ဝင်းကိုမှာ ခင်စမ်းရီ အော်သံအား ဂရုမစိုက်ပေ လီးအား အဆုံးထိ ထုတ်လိုက် ပြန်သွင်း လိုက်နှင့် တချက်ချင်း ဖိလိုးနေ၏။ ခင်စမ်းရီ ကျောပေါ် မှောက်ချကာ ပုခုံးလေး ကိုက်လိုက် ဖင်ကြွလိုးလိုက်နှင့် ခဏအကြာ ဖင်ထဲမှ လီးအားထုတ်ကာ အဖုတ်ထဲ ပြောင်းလိုးပေးသည်။ ခင်စမ်းရီ တယောက် ဖင်ရော အဖုတ်ရော တလှည့်ဆီ အလိုးခံရင်း မျော့နေတော့၏။ ဝင်းကို ပြီးသွားချိန် အရုပ်ကြိုးပျက် ဖြစ်ကျန်ရစ်သည်။
စိုးမြင့် အပြင်ခဏ ရှောင်ပြီး ပြန်လာရာ အိမ်အပေါ်ထပ်၌ ဝင်းကို မရှိတော့ပေ။ ကုတင်နား ရောက်သည်နှင့် ခွေခွေလေး လှဲနေသော မယားဖြစ်သူ ဖင်ကြီးအား ကြည့်ကာ လီးက ထောင်ထွက်နေသည်။ ပုဆိုးအား စလွယ်သိုင်းကာ အဖုတ်ဝ တေ့ရင်း ဆောင့်လိုးတော့၏။ ” အား …… အမေ့ ……… ကိုစိုးမြင့် လား ” ” အင်း …… ရှီးးး …… အင့် ……… ဘွတ် ဘွတ် … ကောင်းတာကွာ ” ဝင်းကို လီးဒဏ်ကြောင့် ခင်စမ်းရီမှာ ဖင်ရော အဖုတ်ပါ ကျိန်းနေရသည်။ ကံကောင်း ထောက်မှစွာ စိုးမြင့်မှာ ကြာကြာ မလိုးနိုင်ခဲ့ အချက် ၃၀လောက် ဆောင့်ကာ အဖုတ်ထဲ လရည် ပန်းထဲ့ရင်း ဘေးနား ဝင်လှဲနေသည်။ ” ကိုစိုးမြင့် …… မြို့ မတက်ဖူးလား ” ” အင်း ” ” ဘာလို့ ” ” နောက်၁ပတ်မှ … သွားတော့ မလို့ ” ၁၀ရက်ခန့် ဝင်းကို ပျောက်နေပြန်သည်။ ခင်စမ်းရီ အိမ်မှု့ ကိစ္စများ လုပ်ပြီးတိုင်း အနားယူချိန် ဝင်းကို လီးကြီးသာ မြင်ယောင် နေမိသည်။ စိတ်ထဲ တနုံ့နုံ့ဖြင့် တခုခု လိုအပ်သလို ခံစားနေရ၏။ လင်ဖြစ်သူ စိုးမြင့်နှင့်လည်း ၁ပတ် ၁ခါလောက်သာ လင်မယား သဘာဝ ဆက်ဆံ ဖြစ်သည်။ အိမ်သာ ထဲဝင်ပြီး အဖုတ်ထဲ လက်သွင်း မွှေကာ အာသာ ဖြည်သော်လည်း စိတ်ကျေနပ်မှု့ မရခဲ့ပေ။
နောက်၃ရက်ခန့် ညီမဖြစ်သူ အိမ်ဘက် လူရိပ် မြင်လိုက် သဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှား သွားမိသည်။ လင်တော်မောင် စိုးမြင့် အပြင် ထွက်သည်နှင့် ဟန်မဆောင် နိုင်တော့ ညီမဖြစ်သူ အိမ်ဘက် ခြေဖွနင်းကာ လျှောက်လာခဲ့သည်။ ထင်သည့် အတိုင်း ဝင်းကို ပြန်ရောက်နေသည်။ ခင်စမ်းရီ ထင်သည့် အတိုင်း ဝင်းကို ပြန်ရောက်လာသည်။ တယောက်ထဲတော့ မဟုတ် မယားဖြစ်သူ တက်မေသန်းပါ အတူ ပါလာခဲ့၏။ ” အား …… အား …… အား …… လိုးစမ်း …… ဖင်ကို … လျှာနဲ့ …… လိုးစမ်း …… အား …… ကောင်းလိုက်တာ ဟာ ” တင်မေသန်းအား ကုတင်ပေါ် ပက်လက် လှဲခိုင်းပြီး ပေါင်ကြားထဲ ခေါင်းတိုးကာ ယက်ပေးနေ၏။ မယားဖြစ်သူ အကြိုက် လျှာအား စုချွန်ကာ ဖင်ပေါက် နီညိုလေးအား ထိုးလိုက် ဖိယက်လိုက် မွှေလိုက် လုပ်ပေးနေသည်။ ” အင်း … အင်း …. အ …… ရှီး ….. အား ….. ကျွတ် ……… တော်ပြီ ……… ပြီးသွား လိမ့်မယ် ” တင်မေသန်း ထထိုင်စဉ် ဝင်းကိုမှာ ထရပ်ရင်း ပုဆိုးချွတ်ကာ ပါးစပ်နား လီးထိပ် တေ့ပေး လိုက်တော့သည်။ တင်မေသန်း မှာ အရင်ဆုံး ဒစ်ဖူးအား ဆွဲစုပ်ကာ ပါးစပ်ထဲ ငုံရင်း လဥ၂လုံးအား လက်ဖြင့် ချေပေးနေသည်။
ခဏ အကြာမှ လီးတံအား အရင်းထိ မျိုထားလိုက်၏။ ခင်စမ်းရီ တယောက် ညီမဖြစ်သူ၏ လီးစုပ် ကျွမ်းကျင်မှု့ အပေါ် အားကျနေမိသည်။ ပါးစပ်အား လီးအရင်းထိ အလိုးခံနိုင် သော်လည်း မျိုမချ နိုင်သေးပေ။ တင်မေသန်းမှာ လုပ်နေကျ အလုပ်တခု လုပ်နေသလိုပင် အခက်ခဲမရှိ လီးအား အရင်းထိ မျိုလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်နှင့် ဒစ်ဖူးအား သွားလေးဖြင့် ဖိဖိ ကိုက်ပေး နေပြန်၏။ ခင်စမ်းရီ တယောက် စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေကာ လက်တဖက်မှာ ပေါင်ကြားထဲ ထမိန်အပြင်မှ ပွတ်နေမိသည်။ မမြင်တာ ၁၀ရက်ကျော် ရှိနေသော ဝင်းကို လီးကြီးမှာ ညီမဖြစ်သူ ပါးစပ်ထဲ အကြောစိမ်းများ ထကာ တင်းပြောင် နေသဖြင့် ပြေးပြီးစုပ်ချင်သည့် စိတ်များ တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်နေရ၏။ လိုးတော့ဟာ ……… ဝင်းကို ” တင်မေသန်းမှာ လီးထိပ်အား ခပ်ပြင်းပြင်း တချက် ဆွဲစုပ်ရင်း ကုတင်ပေါ် ဝင်းကိုရှေ့ လေးဖက် ကုန်းပေး လိုက်သည်။ ” မိန်းမ … အဖုတ် လိုးရမှာလား … ဖင်လိုး ရမှာလား ” ” ဖင် အရင် လိုးဟာ … နင် ငါ့ကို …… ဖင်လိုး မပေးတာ … ကြာပြီ ” ” ဟမ် …… နင့်ပါသာ … စိတ်ဆိုးပြီး …… အမေ့အိမ် …… ပြန်ပြန် အိပ်နေတာလေ “။
” တော်စမ်းပါ …… အမေ့ဆီ ပြန်အိပ်လည်း …… နင်လိုးချင်ရင် … လာလိုးလို့ … ရနေတာ …… ဘယ်မယား …… သွားလိုး နေမှန်းမှ … မသိတာ ဟွန့် ” ဝင်းကို ဘာစကားမှ ထပ်မပြောတော့ တင်မေသန်း ဖင်ဝလေးထဲ တံတွေး ထွေးချကာ လက်ခလယ် လေးနှင့် ထိုးမွှေ ပေးနေသည်။ ခဏအကြာ လက်ညိုးပါ ပူးထည့် မွှေရာ တင်မေသန်း ဖင်ကြီး အငြိမ် မနေနိုင်တော့ ရမ်းခါရင်း ဖင်ကြီး ကော့ပေးနေတော့၏။ ” ဟင့် ….ရှီးးးးး …… အအ ….အရမ်း ကောင်းနေပြီ…… ယောက်ျားရယ် ……… အားဟား ……… လိုးပါတော့ ” တင်မေသန်း စကားအဆုံး ဝင်းကိုမှာ ဖင်ထဲမှ လက်ချောင်းများ ပြန်ထုတ်ရင်း ဖင်အား ဆွဲထောင် ပစ်သည်။ လီးထိပ်အား တံတွေးစွတ်ရင်း ဖင်ထဲ ဖိသွင်း ပြစ်၏။ ” အ ……… အမေ့ ………… ရှီးးးးးး ” ဒစ်ကြီး မြုတ်သွားသည်နှင့် တင်မေသန်း ခေါင်းလေး မော့တက်လာသည်။ ဝင်းကို ဆောင့်လိုးတိုင်း ဖင်ကြီး ကော့ပေးရင်း အော်ညည်းနေ၏။ ခင်စမ်းရီ တယောက် ညီမဖြစ်သူ ဖင်ထဲ ဝင်ထွက်နေသော လီးကြီးအား ကြည့်ကာ ဖင်ဝလေး ယားလာပြီး အစား ဝင်ခံချင်သည့် စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။
အဖုတ်ပွတ် နေသော လက်အား ဖင်ဆီရွေ့ကာ ထမိန်အပြင်မှ ဖင်ပေါက်လေး ထဲ ရသလောက် လက်ချောင်းလေး ထိုးသွင်းပစ်၏။ ” အား … အား ………… ယောက်ျား ရယ် …… လိုးပါ ……… အအ ……… ကောင်းလိုက်တာ ဟာ ” ထိုချိန် ညီမဖြစ်သူ အော်သံလေး ထွက်ပေါ်လာ သဖြင့် သေချာ ပြန်ကြည့်နေပြန်၏။ ” ကောင်းလား …. မိန်းမ ….. အင့် ……… အင့် ……… ဇွိ …………… ဗွပ် ” ကြည့်နေရင်း ဝင်းကို၏ စောင့်ချက်များ ပြင်းထန်လာကာ ချွေးများ ရွှဲလာသည်ကို မြင်နေရသည်။ ” အအ ……… ရှီး….. ကျွတ် ………… လိုးလိုး …… ယောက်ျား ….. မရပ်နဲ့တော့…… မိန်းမ ….. ပြီး တော့ မယ် နော် ……… အအအအ ……… ကောင်းတာ ……… ယောက်ျား ရယ် ” ” အင့် ……….ညှစ်ထား ….. မိန်းမ ……. အားအား ………… ယောက်ျားလည်း ပြီးတော့မယ် … ရှီးးးးး ………… အင့် အင့် ” အဆက်မပြတ် ဆွဲလိုးရင်း ဝင်းကို တယောက် တင်မေသန်းနှင့် ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် ပြီးကာ ဖင်ထဲ လရည်များ ပန်းထည့်ရာ ပြည့်လျှံ နေတော့သည်။ ခင်စမ်းရီ အိမ်ဘက် ပြန်လာရာ ပေါင်ခြံထဲ စောက်ရည်များ စီးကျ နေ၏။ ညပိုင်း ထမင်းစားပြီး သည်နှင့် အိပ်ယာ ဝင်ရာ အိပ်မပျော်တော့ပေ …. ပြီးပါပြီ။